जीवन शैली « Pana Khabar
तीज हिन्दू धर्माबलम्बी महिलाहरूले महत्वपूर्ण चाडको रूपमा मनाउँदै आएको पाइन्छ । पौराणिक मान्यता अनुसार देवी पार्वतीले भगवान शिवको दीर्घायु, सुस्वास्थ्यको कामना गरी व्रत राखेकै कारण हिन्दू महिलाहरूले तीज मनाउँदै आएको
यो हो ल्वाङको कथा
नेपाली भान्सामा मसलाको रुपमा प्रयोग हुने ल्वाङ स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै उपयोगी चिज हो । पाचनक्रियामा सहयोगी, क्यान्सरविरुद्ध लड्ने, कलेजोको बचाउने, रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि गर्ने, मधुमेह नियन्त्रण गर्ने, हड्डी मजबुत
मानसिक स्वास्थ्यका लागि व्यायाम सकारात्मक, तर धेरै गरे झन बेफाइदा
मानसिक स्वास्थ्यका लागि शारीरिक व्यायामले राम्रो गर्ने तर धेरै व्यायाम भने नकारात्मक हुने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । अमेरिकाका १२ लाख मानिसमा गरिएको अनुसन्धानबाट हप्ताको तीनदेखि पाँच दिन ४५ मिनेटसम्म शारीरिक
साङ्लोले सतायो ? अब यसरी भगाउनुस्
साङ्लोले नसताएको घर कमै भेटिएला । अँध्यारा कुनाकाप्चामा लुकेका साङ्लाहरू फुत्तफुत्त निस्केर तपाईंलाई हैरानै गर्छन् होला । गर्मी र बर्खाका बेलामा साङ्लाको संख्या ह्वात्तै बढ्छ । अनि त कहिलेकाहीँ पकाइराखेको
तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी मुक्त हुनुस्
चिन्ता र तनावबाट सायदै संसारका कोही मान्छे अछुतो रहेका होलान्। हरेक व्यक्तिलाई कुनै न कुनै प्रकारको चिन्ता हुन्छ। तनावकै कारण कतिपयले आत्महत्या समेत गर्ने गरेका छन्। नेपालीमा एक उखान निकै
लोकप्रिय साउथ इन्डियन फुड
लक्ष्मण अधिकारी दुध सागरका कर्मचारी हुन् । जमल स्थित रहेको दुधसागर रेस्टुरेन्टमा शुद्ध सहकारी खानाका परिकारहरु पाइन्छ। अन्य मौसमा भन्दा साउन महिनामा मानिसहरुको बढी घुइचो लाग्ने गर्छ । ‘अन्य समयमा
दैनिक एउटा स्याउ खानुका फाइदा
दिनको एउटा स्याउ खाँदा डाक्टरकहाँ धाउनुपर्दैन भन्ने पुरानो आहान नै छ । वास्तवमा स्याउ एकदमै स्वस्थकर खानेकुरा हो । स्याउमा एन्टीअक्सिडेन्ट, फाइबर र फ्लेभोनोइड प्रशस्त पाइनछन् । यसमा भएको फाइटोन्युट्रिएन्टले
स्वादिलो काजु स्वास्थ्यका लागि पनि लाभदायक
काजुलाई ड्राइफुडको राजा भनिन्छ । काजु खानमा जति स्वादिलो हुन्छ, यो स्वास्थ्यका लागि पनि त्यतिकै लाभदायक पनि । काजुमा मैग्निसियम, कपर, आयरन, पोटासियम लगायतका तत्व भरपुर मात्रामा पाइन्छ । यी
५ मिनेटमै यसरी चिनीको प्रयोगले काखीको कालो दागी र रौ हटाउनुस् !
आजभोलि केटि अथवा महिलाहरु धेरै आधुनिक ड्रेसअप गर्ने र राम्रो देखिनको लागि शरीरका रौँहरु पनि हटाउने गर्दछन् । त्यसैगरी अजकलका युवतीहरु गर्मीमा छोटा कपडा लगाएर शोअप भनौं या खुलेर हिड्न
तामाको भाँडोमा राखिएको पानी पिउँदा हुन्छ यस्ताे फार्इदा
तामाको विशेष महत्व छ हिन्दु संस्कारमा । पुजा पाठ देखि हरेक काममा तामाको भाँडाको प्रयोग गरिन्छ । तामालाई पवित्र धातु मानिन्छ । शास्त्रमा सुन, चाँदी र तामालाई पवित्र धातु भनिएको
यी हुन् पुदीनाका लोभलाग्दा फाइदा
नेपाली भान्सामा खासगरी अचारको रुपमा प्रयोग गरिने पुदीना लोकप्रिय जडिबुटी हो। यसले खाना पचाउन सहयोग गर्नुका साथै तौल घटाउने, अरुचीबाट मुक्ति दिने, डिप्रेसन तथा थकान घटाउने र टाउको दुखाई हटाउनेलगायतका
२०७५ साल मंसिर १ गते शनिबार इश्वी सन् २०१८ नोभेम्वर १७ तारीखको राशिफल
श्रीपशुपतिनाथको कृपाले कार्तिक ३० देखि मंसिर ६ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल यस्तो छ
नागरिकको चेतनासँग किन डरायो ओली सरकार ? ओली सरकारको नियतमाथि गम्भीर शंका ! (भिडियो)
भेटियो १ किलो सुन,वास्तबिकता अर्कै, श्रम कार्यालयमा दलाललाई स्वागत पत्रकारलाई निषेध !
कार्तिक २७ गते मंगलबार इश्वी सन् २०१८ नोभेम्वर १३ तारीखको राशिफल